China Dual wrench wrench, ratchet dual-purpose wrench, Movable head ratchet wrench, double open wrench, box wrench, adjustable wrench factory and manufacturing | Boda
Drafitra roa sosona, wrench misy tanjona roa ratchet, wrench ratchet loha azo ovaina, wrench malalaka misokatra, boaty boaty, maivana azo ovaina
Fanasokajiana sy fampiharana ny spanner:
Ny spanners dia mizara roa amin'ny ankapobeny, wrench maty ary wrench mivantana. Ilay teo aloha dia manondro ny tranainy misy isa voafaritra voasoratra eo, fa ilay farany kosa dia ny maivana azo ovaina.
1. Sasa mivaingana: ny lafiny iray na ny roa tonta dia vita amin'ny fanokafana habe raikitra, izay ampiasaina hikorisa ny voanjo na kofehy mitovy habe aminy.
2. Box spanner: ny sisiny roa dia misy lavaka hexagonal na lavaka roa ambin'ny folo zoro miasa farany, mety amin'ny toerana iasana tery, tsy afaka mampiasa tranga mahazatra mahazatra.
3. Rindrambaiko tanjona roa: ny faran'ny iray dia mitovy amin'ny zoro tokana tokana, ny faran'ny iray dia mitovy amin'ny halavan'ny peratra, ary ny kofehy na ny voanjo mitovy famaritana dia voahidy amin'ny lafiny roa.
4. Ny fanjaitra azo ovaina: ny sakany fanokafana dia azo ahitsy ao anaty habe iray habe, ary azo ampiasaina hanodinana bolts na voanjo misy famaritana samihafa. Ny endrika mampiavaka ny wrench dia ny valanorano raikitra dia atao valanoranom-pisaka misy nify tsara; ny tendron'ny valanorano mihetsika dia atao valanorano fisaka; ny tendrony hafa kosa dia natao valanorano mirongatra manana nify tsara; amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kankana dia afaka esorina haingana ny valanorano mihetsika ary azo ovaina ny toeran'ny valanorano.
5. Valan-jiro: fantatra koa amin'ny anarana hoe crescent wrench, ampiasaina hampiodina ny hatevin'ny voanjo fisaka voafetra.
6. Socket wrench: izy dia misy sockets marobe misy lavaka hexagonal na lavaka roa ambin'ny folo, ary misy tohotra, tehina fanitarana ary kojakoja hafa. Izy io dia mety indrindra amin'ny bolt na voanjo izay misy toerana lava volo na fahaketrahana lalina.
7. Hexagon wrench: L miorina amin'ny hexagon bara, ampiasaina manokana hanodinana visy hexagon. Ny maodelin'ny wrench hexagon dia mifototra amin'ny haben'ny lafiny mifanohitra amin'ny hexagon, ary ny haben'ny bolt dia manana ny fenitra nasionaly. Tanjona: ampiasaina manokana izy io amin'ny fametahana na famongorana voanjo boribory amin'ny fitaovan'ny milina, fiara ary fitaovana mekanika.
8. Torque wrench: afaka mampiseho ny tselatra ampiharina rehefa manily ny bolt na ny voanjo; na rehefa mahatratra ny sanda voatondro ny tselatra ampiharina dia handefa famantarana hazavana na feo. Ny valizy tselatra dia ampiasaina amin'ny fivoriambe miaraka amin'ny tselatra voalaza.
Fampiharana wrench mitambatra: wrench indostrialy lehibe-tanjona dia mety amin'ny solika, simika, metallurgy, famokarana herinaratra, fanadiovana solika, fanamboarana sambo, petrochemical ary indostria hafa. Fitaovana ilaina amin'ny fametrahana fitaovana, fikojakojana ny fitaovana sy fitaovan'ny fitaovana. Ny tanjona roa sosona dia mizara ho rafitra metric sy ny rafitra anglisy. Fitaovana enti-miasa / wrench miaraka amin'ny tanjona roa: ny valizy roa-tanjona dia vita amin'ny vy vy 45 na vy vy 40Cr. Ny fenitry ny famokarana marin-kazo roa sosona: GB / t4392-1995 (wrench solid wrench and percussion boat wrench). Endri-javatra amin'ny wrench misy tanjona roa: ny wrench / wrench miaraka amin'ny tanjona roa sosona dia namboarina avy amin'ny vy karbaona medium na kalitaona avo lenta. Izy io dia manana ny mampiavaka ny famolavolana antonony, ny firafitra milamina, ny hakitroka avo lenta, ny fanoherana mahery vaika, tsy misy aforitra, mitohy, tsy misy miondrika, ny refy avo lenta ary ny faharetany.
1. Chromium vanadium steel: marika simika CR-V, izay kalitao tsara amin'ny vy.
2. vy vy: ankapobeny ny kalitao, ary maro ny eny an-tsena.
Wrench dia karazana fitaovana fametrahana sy fanalana mahazatra ampiasaina amin'ny fiainana, izay ampiasaina hanodinana bolts na voanjo.
Misy karazana spannera roa, wrench raikitra ary wrench malefaka. Ny voalohany dia manondro ny tranainy izay nosoratana tamina isa marimaritra iraisana, fantatra koa amin'ny anarana hoe wrench matevina, ary ity farany kosa dia ilay wrench azo ovaina.
Ny sakan'ny fanokafana ny wrench mihetsika dia azo ahitsy ao anatin'ny faritra iray. Izy io dia fitaovana hanamafisana sy hamaha ny voanjo ary hidiny amin'ny famaritana samihafa. Ny lozisialy azo ovaina dia misy lohany sy tahony, ary ny loha dia voaforon'ny molotra lovia azo ovaina, molotra henjana, vava lovia, turbine ary tsimatra hazo.
Ny fantsom-pahafatesana fantatra amin'ny anarana hoe wrench solid, mizara roa ho wrench matevina mafy loha sy wrench solid loha tokana. Izy io dia manana lahasa isan-karazany, indrindra amin'ny fikojakojana mekanika, fitaovana, haingon-trano, fanamboarana fiara ary sokajy hafa. Ny wrench solid mafy loha dia fitaovana ankapobeny, izay ilaina amin'ny fanangonana fitaovan'ny milina na kojakoja fanodinana, fitazonana ny milina ary ny fikojakojana ny milina.
Previous: Sombin-kazo vita amin'ny ala, alim-bary vita amin'ny aliminioma, antsy boribory karbida, fitaovana fanapahana
Manaraka: Hexagon wrench, wrench hexagon wrench, boaty hexagon wrench, ball karazana hexagon wrench